Nagarik Shukrabar - उत्तेजना समस्याले तनाव !
शनिबार, २७ असार २०७७, १२ : ३४
सोमबार, २४ माघ २०७३, ११ : ४३ | अम्मर जिसी , Kathmandu
यौन र यौन जीवनका विभिन्न पक्षबारे नेपाली समाज राम्ररी खुल्न सकेको छैन । कतिपयका निम्ति सेक्स विशुद्ध शारीरिक कर्म हो । तर, यसको मनोवैज्ञानिक आयाम सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । यही तथ्य नबुझिदिँदा विभिन्न समस्या आइलाग्छन् । हाल थुप्रै पुरुष (केही हदसम्म महिला पनि) ले भोगिरहेको पीडा हो– उत्तेजना समस्या, जसलाई मेडिकल भाषामा ‘इरेक्टाइल डिसफंक्सन’ भनिन्छ । अलिकति मनोपरामर्शले, अलिकति उपचारले समाधान हुने यो समस्या यति विकराल किन भइरहेको छ ? अम्मर जिसीले यसको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
श्रवण २९ वर्षका भए, ऋचा २८ टेक्दै छिन् । वैवाहिक सम्बन्धको दोस्रो वर्षगाँठ गत जेठमा मनाइसकेको यो जोडी झट्ट हेर्दा हाँसीखुशी नै देखिन्छ । तर, आफूहरूमा थेरैथोक अपुग ठान्छन् उनीहरू । उनीहरूकै शब्दमा अहिलेसम्म उनीहरूबीच शारीरिक सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकिरहेकै छैन । हरेक रातका असफल प्रयासका नमीठा अनुभवले यो जोडीलाई भित्रभित्रै जलाइरहेको छ । श्रवणको लिंग उत्तेजित नै नभइदिने समस्याले यो जोडी आजित छ । लगनगाँठो कसिएको अढाई वर्षसम्म पनि शारीरिक सुखको अनुभव गर्न नपाएको यो जोडी अहिले यौन परामर्शदाता डा. बद्रीप्रसाद भट्टराईसँग उपचार गराइरहेको छ । भट्टराईका अनुसार यो जोडीलाई मनोवैज्ञानिक यौन परामर्शको प्रयास भइरहेको छ । श्रवणलाई हर्मोन वृद्धि गर्नेबाहेक अरू औषधि चलाउनुपरेको छैन । ‘शारीरिक रूपमा स्वस्थ भए पनि उनीहरू यौन सुखका लागि चाहेका बेला मानसिक रूपमा तयार हुन नसक्ने समस्या छ,’ भट्टराईले भने, ‘जहिल्यै मैले यौन सुख दिन सक्दिनँ होला भन्ने नकारात्मक सोचका साथ श्रीमतीका अगाडि पुगेपछि कसरी लिंग उत्तेजित हुन्छ ?’
आफ्नी श्रीमतीलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दिनँ भन्ने मनोभावले कुण्ठित बन्दै सुरु भएको सन्तोषको दाम्पत्य जीवन तीन महिनामै टुंगियो । स्कुल उमेरदेखि नै सन्तोषलाई आफ्नो लिंग साथीभाइलगायत अरूको भन्दा ‘बिचरो’ लाग्थ्यो । उत्तेजित नभएका बेला झन् सानो देख्दा उनी चिन्तित हुन्थे । ‘कतै म अपूर्ण त छैन ?’ उनलाई आफैँमाथि शंका लाग्थ्यो । डाक्टरलाई देखाए । ‘मेडिकल्ली फिट छ’ मात्र भन्ने डाक्टरको जवाफ हुन्थ्यो । यत्तिकैमा धुमधाम मागी बिहे भयो उनको । सुहागरात सुखद हुनुपर्छ भन्ने सुनेका थिए उनले । ‘तर, खै यति सानो लिंगले कसरी सुखद हुन सक्छ ?’ भन्ने सोचले उनको पहिलो रात निरस रह्यो । लिंगले साथ नै दिएन । दिनदिनै यो समस्या बढ्न थाल्यो । तीन महिनापछि सन्तोषकी नवविवाहित श्रीमतीले आशै मारिन् । ‘यस्तासँग जिन्दगी बित्न सक्दैन’ भन्ने नमीठो प्रहार गरेर सन्तोषलाई त्यागेको घोषणासहित माइती लागिन् ।
धेरैको बुझाइ हुन्छ– उत्तेजित लिंग योनीमा पसाउनु मात्र सेक्स हो । अर्थात्, घर्षण मात्र सेक्स हो । चिकित्सकहरूका अनुसार सेक्सका लागि लिंग र योनी मात्र पर्याप्त होइनन् । यौन कार्यमा धेरै कुराको भूमिका हुन्छ । पहिला त शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनैपर्छ । डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्नेहरूको सेक्स जीवन केही प्रभावित हुन सक्छ । नशा प्रयोग गर्नेहरूमा पनि यौन क्षमता ह्रास हुन्छ । मुख्यतः मनोविज्ञान नै सेक्समा महŒवपूर्ण हुन्छ । पार्टनर नै मन नपरेको हुन सक्छ । उसको बानी र व्यवहार चित्त नबुझ्न सक्छ । शरीरको सुगन्ध, पोजिसन, कुराकानी, तरिका धेरै कुरामा पार्टनर एकअर्कासँग खुशी हुनैपर्छ । खुलेर कुरा सेयर गर्ने र एकले अर्कालाई विशेष ठान्ने बानीले पनि सेक्स जीवन स्वस्थ हुन सक्ने डा. उपाध्याय बताउँछन् । भन्छन्, ‘सुखद यौन जीवनका लागि सन्तुलित मनोविज्ञान सबभन्दा पहिलो पक्ष हो । र, अन्य धेरै कुराले प्रभाव पार्ने भएकाले सेक्सलाई लिंग र योनीको संयोगका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।’
शीघ्र स्खलनको समस्या प्रायः सबैले अनुभव गरेका हुन्छन् । चा“डो वीर्य स्खलन हुने समस्या सापेक्षिक कुरा हो । यसलाई परिभाषित गर्न गाह्रो छ । डा. उपाध्यायका अनुसार स्वस्थ व्यक्तिको तीन मिनेटमै वीर्य स्खलन हुन्छ भने शीघ्र स्खलन भएको ठान्ने व्यक्तिले साढे तीन मिनेटमा वीर्य स्खलन हुँदा पनि सिकायत गर्न थाल्छन् । तुलनात्मक रूपमा महिलालाई चरम सुखमा पुग्न ढिलो हुन्छ । त्यसैले पनि पुरुषले शीघ्र स्खलनको अनुभूति गर्छ । कतिपयले भने वीर्य स्खलनअगाडि आउने रसलाई वीर्य ठान्ने र यौन फिल्ममा देखाइएको लामो यौनकार्यको दृश्यबाट प्रभावित भई आपूmमा शीघ्र स्खलन भएको शंका गर्ने गरेको डा. उपाध्याय बताउँछन् । ‘तर, अवधिलाई लिएर अनावश्यक चिन्ता गर्नु व्यर्थ छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो यौन पार्टनरसँग राम्रोसँग फोरप्ले गरिएको छ, उनलाई राम्रोसँग उत्तेजनामा ल्याइएको छ भने एकदेखि तीन मिनेटसम्म इन्टरकोर्स गर्दा पर्याप्त हुन्छ । तर, पार्टनर देख्नेबित्तिकै बाघले शिकार झम्टेको जस्तै गरी झम्टिने हो भने दुवैको सेक्स लाइफ बिग्रन्छ । केटीहरू ढिलो उत्तेजनामा आउने र ढिलै शान्त हुने भएकाले उनीहरूमा उत्तेजना केही समय स्थिर रहन्छ । त्यसैले फोरप्लेमा जति बढी केटीलाई उत्तेजनामा ल्याउन सक्यो, यौन सम्पर्कका बेला त्यति नै बढी आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’
चिकित्सकहरूका अनुसार शीघ्र स्खलन नियन्त्रण सम्भव छ । यौनसम्पर्कको क्रममा वीर्य स्खलन होला जस्तो भयो भने लिंग बाहिर निकाल्ने अनि फेरि चालु गर्ने, पार्टनरको अंगमा ध्यान नदिने, यौन क्रीडा रोकेर ध्यान अर्कैतर्पm मोड्ने, महिलामाथि पुरुष तल रहेर यौनक्रिडा गरेमा स्खलन ढिलो हुने हुनाले आसन परिवर्तन गर्ने, स्खलन हुन लाग्दा पार्टनरलाई गति कम गर्न संकेत गर्ने, स्खलन होला जस्तो भयो भने लिंगको फेदमा अ“ठ्याउने, अण्डकोष र मलद्वारबीचको वीर्य नली थिच्ने, कम चिप्लोयुक्त बाक्लो खालको कन्डमको प्रयोग गर्ने गरेमा शीघ्र स्खलनको समस्या बिस्तारै हट्ने सेक्सोलोजिस्टहरू बताउँछन् ।
यौन सम्पर्क राख्नुअघि पुरुष र महिला दुवै शारीरिक तथा मानसिक रूपले तयार हुनुपर्छ । आफ्नो कोठा सुरक्षित, सजिलो र डिस्र्टब नहुने हुनुपर्छ । यौन सम्पर्कका बेला हतार गर्नु हुँदैन । सुरक्षित वातावरणको अभावमा हतारमा काम सिध्याउने हिसाबले यौन सम्पर्क गर्दा कसैको पनि ‘सेक्स पर्फर्मेन्स’ राम्रो हुँदैन ।